I-RING YE-ENGAGEMENT YE-PRIYANKA CHOPRA KWAKUFUNEKA IVELE KWI-TIFFANY & CO. - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato I-Ring yokuzibandakanya ka-Priyanka Chopra kwafuneka ukuba ivele kwiTiffany & Co: Nali iNqaku elipheleleyo
UPriyanka Chopra uzimase iTiffany & Co 2018 iBlue Book Collection: AmaXesha amane eTiffany ukubhiyozela eStudio 525, eNew York Tiffany naseCo 2018 iBlue Book Collection Celebration, eNew York, e-USA-09 Okt 2018. (Ityala: Ifoto ngu U-Evan Agostini / umbono / i-AP / i-REX / iShutterstock)
Ngu: Esther Lee 10/10/2018 ngo-12: 59 PM
Mnike isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa kwaTiffany. I-Bollywood superstar Priyanka Chopra khange babenaso isitayile sokubandakanya ngaphambili UNick Jonas Ukhethe enye ehlotyeni, kodwa wayeqinisekile ukuba isiqwenga kufuneka sivele kuhlobo oluthile: Tiffany & Co.
Ewe, kusenokwenzeka ukuba ndiyilahlile loo nto, utshilo uChopra Abantu kule veki. Ndicinga ukuba saba nencoko malunga nayo xa sasithandana kwaye bendihlala ndiyazi ukuba kufuneka ibe nguTiffany.
Ngapha koko, uthando lukaChopra ngophawu luye lwangamashumi eminyaka ubudala. Ndayazi nje okoko bendisemncinci, wachaza. Okokuqala, kwakunjalo Isidlo sakusasa eTiffany uyenzele yonke intombazana emhlabeni kwaye, ewe, Ikhaya elimnandi laseAlabama weza wabeka isitampu kuyo ukuba kufuneka ibe nguTiffany!
Isangqa sokuzibandakanya kuka-Priyanka Chopra. (Ityala: Ifoto nguStephen Lovekin / REX / Shutterstock)
UJonas uphakamise ngoJulayi ngesiko, isangqa sokusika umsesane wokubandakanya iidayimani ze-baguette kwicala ngalinye. Emva kobuqhetseba bokufaka iringi epokothweni yakhe esidlangalaleni nakwezinye iimeko zokuphepha isihloko, ekugqibeleni esi sibini saqala esi siqwenga ngexesha lomsitho wabo wesiko eRoka eMumbai, eIndiya, ngo-Agasti.
Isiphakamiso sakhe, nangona kunjalo, sasingafani noPatrick Dempsey Ikhaya elimnandi laseAlabama Okwangoku xa ebuza umlinganiswa kaReese Witherspoon ukuba akhethe enye ngaphakathi kwivenkile yeFifth Avenue.
Hayi, bendingekho, uChopra uqinisekisile kule veki. Uye nabantakwabo bahamba bayokwenza yonke into yokuthenga umsesane womfazi wakhe ozayo.
nini ukumxelela ukuba uyamthanda
Imibala yomtshato we-rustic yokuwa
Imidlalo yokuhlamba yomtshato ngexesha le-covid
Ivesi zebhayibhile ngothando omnye komnye
reem acra ilokhwe yomtshato blush
itemplate yesimemo somtshato simahla
Isikhumbuzo seminyaka eli-15 somfazi